Otu esi etinye ImageMagick na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye ImageMagick na Rocky Linux 8
October 30, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1 - Wụnye ImageMagick site na DNF
Nwalee & Nyochaa ImageMagick
Iwu njedebe Ọmụmaatụ
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye ImageMagick na Rocky Linux 8 iji DNF ma ọ bụ usoro ntinye isi mmalite.
Ụzọ kachasị mfe na nke akwadoro iji wụnye bụ iji Njikwa ngwugwu DNF maka nkezi onye ọrụ. Ihe iseokwu a bụ na iyi ngwa ngwa Rocky Linux 8 anaghị abịa na ngwugwu ahụ, yabụ ị ga-achọ ịwụnye ebe nchekwa EPEL wee mee ka ọ rụọ ọrụ. "PowerTools."
Mbụ, wụnye Ụlọ ọrụ EPEL na-eji iwu a:
Na-esote, mee ka ebe nchekwa PowerTools:
Ugbu a tinye ImageMagick site na iji iwu a:
Ụdị Y wee pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mezue nrụnye.
Ozugbo echichi ahụ mechara, nyochaa nrụnye site na ịlele ihe nrụpụta na ụdị.
A ga-edozi mmelite site na iji iwu melite sistemu ọkọlọtọ.
Iji wepu ImageMagick na sistemu gị, jiri iwu a.
Mara, nke a ga-ewepụkwa ndabere niile ejighi ya maka iwepụ kpamkpam.
Ị ga-achọ ugbu a iji ./configure iwud:
Aghụghọ dị mma bụ ịkọwapụta ya -j n'ihi na nke a nwere ike ịbawanye ọsọ nke mkpokọta ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nkesa dị ike.
Dịka ọmụmaatụ, LinuxCapable nkesa nwere 6 CPUs, enwere m ike iji 6 niile ma ọ bụ opekata mpe jiri 4 ruo 5 mee ka ọsọ ọsọ.
Ozugbo ebubatara, megharịa usoro iji wụnye mmelite ahụ.
Ọ bụrụ na ị wụnye ImageMagick site na iji ma ọ bụ iji DNF repository ma ọ bụ ImageMagick isi iyi, ule logo.gif ga-adị na ebe obibi ndekọ.
Na nkuzi, ị mụtara ụzọ abụọ iji wụnye ImageMagick on Nkume Linux 8. N'ozuzu, ImageMagick ka na-ewu ewu nke ukwuu, karịsịa na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ WordPress na plugins, ma ọ bụ nhọrọ a nwalere na anwale maka igosipụta, ịmepụta, ịtụgharị, gbanwee, na dezie ihe oyiyi raster.
Otu esi etinye WordPress na LEMP (Nginx, MariaDB, na PHP) na Rocky Linux 8